Mmụta Franchises maka Ọzụ | Ohere Franchise | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»South Africa»Mmụta Franchises
Franchises Mmụta Ejiri Mara
Franchises Mmụta kacha ọhụrụ
Azụmaahịa na-enyere nwatakịrị ọ bụla aka ka ọ bụrụ otu ihe na-akwụghachi ụgwọ dị ala na ntinye ụlọ na-akwụ ụgwọ ụlọ dị na UK. Gbasara Anyị
Franlọ ọrụ franchise na MagiKats Tuition Centers na-enye gị ohere iru nnukwu azụmahịa ebe ị na-enyeghachi ndị…
Ndị na-enyocha kọmputa
Soro ọnụ ahịa egwuregwu UK na-eduzi ụmụaka kwadebe ụmụaka maka ọdịnihu site na iji klọọkụ na teknụzụ na-akpali akpali Anyị na-anapụta ...
Franlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na-etolite etolite na-eto eto n'ofe ụwa site na ndị na-achọ franchisees, ọ bụghị naanị n'ihi uru ha.
90% nke ndị okenye nwere ụmụ na-erubeghị afọ 50 na ha niile ga-achọ agụmakwụkwọ iji kwadebe ha maka ịbụ okenye.
Enwere ọtụtụ ohere ịsụgharị asụsụ dị iche iche dị, yana ihe na -eme ngalaba ngalaba a ọfụma bụ na ụdị agụmakwụkwọ ọhụụ na-etolite n'afọ ole na ole ọ bụla. Iji maa atụ, kọmputa nzuzo kọmputa dị ka ComputerXplorers. Codeing franchises adịghị adị afọ iri gara aga mana mmepe na teknụzụ nwere mmụba n'ọganihu mmụta kachasị ọhụrụ maka ụmụaka.
Educationdị Agụmakwụkwọ Franchises
Enwere ụdị aha agụmakwụkwọ dị iche iche, ebe a bụ ụfọdụ n'ime ọtụtụ ndị dịnụ ịzụta taa.
Nkuzi Franchises - ọtụtụ franchise na-akụzi akwụkwọ na-arụ ọrụ dị ka aha njikwa, nke pụtara na gị onwe gị ekwesịghị ịkụziri ụmụaka. Franchise dịgasị iche mana ọtụtụ ga-achọ ka ị were ndị ọrụ nkuzi ụlọ maka nkuzi ụlọ akwụkwọ maka mpaghara gị.
Nkuzi kọmputa Franchises - dị ka ndị a kpọtụrụ aha na ComputerXplorers, franchise akwụkwọ kọmpụta na - akuziri ụmụaka gbasara teknụzụ na sayensị kọmputa.
Mgbe / Tupu Clublọ Akwụkwọ Club Franchises - nne na nna nke na-arụ ọrụ n'ehihie nwere ike ọgaghị adịcha iji bulite ụmụ ha ma ụlọ akwụkwọ gachaa. Mgbe ụlọ akwụkwọ bọlbụ ụlọ akwụkwọ nọ na-eto eto n'ihi nke a. Franchise dị ka Manna-Seh Child care na-enye mgbe ụlọ akwụkwọ na ezumike ọrụ ezumike gachara. Ọtụtụ franchises na-elekọta ụmụaka na-enye ọzụzụ nke na-eme ka mmata ụmụaka mara n'ụlọ akwụkwọ.
Franchise Agụmakwụkwọ - enwere otutu aha egwuregwu nke na-enye umuaka ihe mmeme egwuregwu n'èzí ulo akwukwo.
Ọ bụghị franchises niile na-akụziri ụmụaka. 'Ll ga-ahụ na ọtụtụ franchise gburugburu ụwa na-enyekwa Mmụta okenye.
Otu uru nke aha mmụta, bụ na azụmaahịa gị maka onwe gị, mana ọbụghị n'onwe gị. N'adịghị ka mbido azụmaahịa, njikwa akwụkwọ bụ ihe ngosipụta na-aga nke ọma na azụmaahịa azụmahịa nke emepụtagharịrị gafee ọtụtụ franchisees na ókèala ha.
Ọ dị mfe ịhụ ihe kpatara ọtụtụ ndị na - achọ ịzọ ọchịchị na-etinye ego na ngalaba mmụta. Chọgharịa ohere dị iche iche ohere mmụta aha na Franchiseek.